Isakhiwo kwiDonga leSixeko (igumbi) - I-Airbnb
Isakhiwo kwiDonga leSixeko (igumbi)
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguAna
Indawo yethu isembindini wedolophu. Igumbi lakho libucala, ungalitshixa kwaye igumbi lokuhlambela labelwana ngalo. Ikhitshi kunye negumbi lokutyela lingasetyenziswa ngokunjalo.
I-Kamnik yidolophu entle kakhulu yamaxesha aphakathi phakathi kweentaba, ilungele ukutyelela iLjubljana yedolophu yaseSlovenia ngemoto, ngololiwe okanye ngebhasi (imizuzu engama-30 kude). Unako kwakhona ukuphumla kwiziko le-Spa Snovik, iGadi yokuPhilisa iTunjice, okanye iArboretum Volčji potok. Ebusika kulungele ukutyibilika e-Velika Planina okanye ukukhwela intaba.
Enye yezinto ezibonwayo zendalo yintwasahlobo yomlambo iKamniška Bistrica. Kumnandi ukuhamba ngeenyawo ukuya kwingxangxasi ye-Orglice okanye kwicawe yokundwendwela yaseSt. Primož. Kukwafanelekile ukuba undwendwele iArboretum Volčji Potok, eyona ndawo ityelelweyo yokulima izitiya eSlovenia. Kwiminyaka engamashumi amabini edlulileyo iye yaduma ngemiboniso yeentyatyambo zasentwasahlobo. Iindwendwe ezivela kuzo zonke iindawo zelizwe nakwamanye amazwe ziza kwi-Arboretum ukuze zithande izigidi ze-daffodil, i-tulip kunye nezinye iintyatyambo zasentwasahlobo. Kwi-Arboretum, iihektare ezingama-80 zemihlaba eyahlukekeke kakhulu ye-ikholoji zihlala malunga ne-2.500 yerhafu yemithi namatyholo.
I-Kamnik yintle, idolophu yembali, ejikelezwe ziintaba, imilambo kunye namahlathi. Ibonelela ngamathuba amaninzi okuhamba intaba, ukukhwela ibhayisekile kunye nokunyuka kwaye ikwayindawo entle yokuqalisa ukutyelela iLjubljana. Kwimizuzu engama-35 ukhwele ngololiwe ungangena kwikomkhulu laseSlovenia. Kufutshane (iikhilomitha ezili-10) kukho iTerme Snovik, apho unokuqubha enyoj kunye nesauna. Ebusika iziko le-ski lithandwa kakhulu yiVelika Planina. Indawo yokuhlala yabelusi eVelika Planina yaziwa njengenye yeendawo ezimbalwa zokuhlala ezinobukhulu obunjalo eYurophu kwaye itsala iindwendwe ezininzi unyaka wonke. Ihlukile ngoyilo lwayo oluqhelekileyo olufanekisela iVelika planina. Abalusi bayakuvuyela ukukumema ukuba ungcamle iimveliso zabo zobisi okanye uzame isidlo sasemini esiqhelekileyo sabalusi; ubisi omuncu kunye ne-buckwheat mush. Ukopha yiyure enye xa uhamba ngemoto.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kamnik